Ujeedada Codsi Ay Dawlada Jabuuti U Dirtay Qaramada Midoobay | Baligubadlemedia.com
Ujeedada Codsi Ay Dawlada Jabuuti U Dirtay Qaramada Midoobay
Dawladda Jabuuti ayaa xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ka codsatay in uu gacan ka geysto sidii xal loogu heli lahaa muranka xudduuda ee u dhaxeeya dalka Eritrea, sida ay faafisay wakaaladda wararka AP.
Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay ka dib markii ay heshiis nabadeed wada saxiixdeen Eritrea iyo Itoobiya ka dib 20 sano oo ay dagaalo u dhaxeeyeen.
Hase yeeshee waxa uu sheegay in
Jabuuti ay doorbideyso in arrinka la hordhigo garsoor caalami ah si ay go’aan uga gaadhaan.
Tan iyo intii heshiiska nabadeed ee taariikhiga ah ay gaadheen dawladaha Eritrea iyo Itoobiya ayaa waxaa isa soo tarayay boggaadinta caalamka ka imaanayso iyo baaqyada ah in nabbadda la adkeeyo.
Eritrea ayaa muran xudduuddeedka u dhaxeeya dhammaan dalalka dariska la ah, sida Suudaan, Yemen, Itoobiya iyo Jabuuti, waxaase hadda muuqda saansaan ah in dublamaasiyadda ay shaqayn karto.
Xaqiiqda ah in Eritrea iyo Itoobiya ay ku kala baxayaan go’aankii guddigii Qaramada Midoobay ee magaalada Badme u go’aamiyay in ay Eritrea leedahay, ayaa waxa laga yaabaa in Jabuuti iyo dalal kalena ay u furantahay in ay Eritrea ku kala baxaan gogol caalami ah.